Famonoana vavy am-bohoka ka hatramin’ny baolina kitra any Nepal · Global Voices teny Malagasy
Ny fandresen'ilay zanakavavy tsy nirina
Voadika ny 13 Oktobra 2021 3:51 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Română , русский, Español, Français, Esperanto , Ελληνικά, 日本語, English
Srijana Singh Thakuri tamin'ny 2008 tamin'ny naha mpianatra azy tao Surkhet. Sary: Kopila Valley avy amin'ny Nepali Time, nahazoana alàlana.Srijana Singh Thakuri in 2008 as a student in Surkhet. Photo: Kopila Valley via Nepali Times, used with permission.
Navoaka tao amin'ny Nepali Times ity lahatsoratr'i Srijana Singh Thakuri ity. Navoakan'ny Global Voices indray ao anatin'ny fifanarahana fizarana votoaty ny endrika nasiam-panovana.
Te hanan-janakalahy ny raiko.
Izaho no vavimatoa ary taorian'izay dia nisy zandriko telo vavy. Bevohoka in-telo indray ny reniko taorian'izay, zazavavy avokoa izy rehetra.
Novonoina avokoa izy ireo tany amin'ny toeram-pitsaboana tsy ara-dalàna izay ahafahan'ny ray aman-dreny mamantatra ny maha lahy na vavy ny zaza ao an-kibo ary mifidy ny fanalan-jaza raha zazavavy izany. Fantatro ankehitriny fa antsoina hoe famonoana vehivavy am-bohoka ity fomba fanao ity ary fahita any Azia atsimo.
Niezaka nitady zazalahy foana ny ray aman-dreniko, nanantena fa hisy zanakalahy tonga amin'ny farany. Efa ampy taona aho ka nahatsikaritra ny alahelo sy ny ahiahy teo amin'ny mason'ny reniko isaky ny nahalala izy fa mitondra zazavavy hafa.
Nomena tsiny fa voaozona sy ketraka ny reniko. Fa maninona no tsy ampy aho? Nahoana no tsy ampy izahay zanaka vavy?
Nilaozan'i Dada izahay nony farany. Indray alina, tsy nisy teny, nanjavona izy, namela anay tao anaty trano rava, fo torotoro, ary andian'olona mpanangona trosa teo am-baravaranay nandritra ny ora tontolo andro.
Niharatsy ny fahasalaman'ny reniko. Zara raha mahita tsiky eny aminy aho. Nanomboka niasa ho mpahandro sakafo tany amin'ny fiantsonan'ny fiara-fitateram-bahoaka aho mba hiezaka hanamaivana ny fanaintainany. Nivarotra akondro sy voankazo izahay ary niezaka nanao izay tratran'ny ainay. Nampanantena an-dreniko tamim-pitomaniany aho fa ho toy ny zanakalahy mendrika izay notadiavin'izy sy ny raiko fatratra aho.
Tsy manome tsiny an'i Dada aho. Raha ny marina dia malahelo azy aho. Lasibatry ny fanjakazakan-dehilahy, tsy nahalala zavatra hafa mihitsy izy. Nandresy lahatra azy ny fiaraha-monina fa tsy mendrika andaniam-bola ny zazavavy, fa ny hany ataon'izy ireo dia ny manambady ary mankany an-tranon'olon-kafa, fa mila zanakalahy ny fianakaviana mba hitondra ny anarana sy handova ny fananan'ny razana.
Fa ny mahatsikaiky dia tsy manana tany holovaina izahay. Tsy nanana na inona na inona izahay. Raha mbola nitady zanakalahy, dia nilatsaka lalina kokoa tao anaty fahantrana, trosa ary fahaketrahana ny fianakavianay.
Mpanorina ny tetikasa Kopila Valley Maggie Doyne miaraka amin'ny ekipa mpilalao baolina kitra zazavavy ao amin'ny Kopila Valley School any Surkhet. Teo no nanombohan'i Srijana Singh Thakuri. Sary: Kopila Valley avy amin'ny Nepali Times. Nahazoana alàlana.
Nanomboka niarina ny zava-drehetra nony farany. Niatrika fanadinana fidirana tao amin'ny sekoly Kopila Valley School ao Surkhet izay fantatra ho sekoly maitso indrindra any Nepal aho. Nahafantatra ny tantarako ireo mpampianatra, ary tsara vintana aho, nahazo ny iray amin'ireo toerana vitsy dia vitsy ho an'ny sokajin-taonako aho. Nandritra ny resadresaka nifanaovana tamiko dia nanazava aho fa raha manam-bintana amin'ny fanabeazana, afaka manampy ny reniko hikarakara ireo zandriko vavy kely telo aho ary hanampy amin'ny fanabeazana azy ireo koa.
Niezaka nandefa ny alaheloko sy ny fahatezerako ho an'ny amin'ny fikirizana aho. Te ho tsara indrindra amin'ny zavatra rehetra aho. Noho ny Raiko dia nahatsapa aho fa nanana zavatra hoporofoina. Tonga kapitenin'ny kilasy aho. Nanatevin-daharana ny klioba fanomezana vahana ny zazavavy aho. Nianatra lesona dihy nentim-paharazana aho.
Nanoratra tononkalo aho ary nandray anjara tamin'ny fifaninanana adihevitra. Nijery boky tany amin'ny tranomboky aho. Nianatra hatramin'ny alina be aho ary nahavita ny asa rehetra nampanaovina ahy mba hahatrarana ireo mpiara-mianatra amiko. Noraisiko avokoa ireo hirika rehetra nandalo tamiko.
Indray andro, nisy fanambarana fa nanomboka ny ekipa mpilalao baolina kitra vehivavy voalohany indrindra ny Kopila Valley School . Niseho tamin'io fanazaran-tena voalohany io teny amin'ny kianja maloto tsy mana kiraro aho, hatsembohana teny amin'ny handriko, vonona hanandrana zava-baovao. Mbola tsy nahita kianja, nijery lalao, na nanao pataloha fohy mihitsy aho teo aloha.
Ao an-tanànako, natao hambolena sakafo ny tany isaky ny santimetatra toradroa, ary natao ho an'ny zazalahy ny fanatanjahan-tena eny amin'ny tanimboly anelanelan'ny vanim-potoana fitomboam-bokatra. Tsy fantatro mihitsy hoe natao ho ahy ny baolina kitra.
Niseho isan'andro aho hanao fanazaran-tena miaraka amin'ny coach Gopi. Nitondra ahy toy ny fitondrany ireo zazalahy izy. Nitabataba tamiko izy nefa koa nampahery ahy. Mbola tadidiko ny lalao voalohany nataoko sy ny fahatsapako tamin'ny nampiditra, nanenjika baolina eny an-kianja.
Nandeha ny fotoana, nanomboka nahay tsara ny baolina kitra aho ary nanomboka nandresy tamin'ny lalao ny ekipanay. Nahatafiditra baolina aho ary natanjaka manokana tamin'ny fiarovana, baolina an-doha ary daka an-joro. Saingy sady nanohy ny fianarako ihany koa aho ary nanomboka nahatsikaritra aho fa sady mpianatra no atleta.
Niditra ekipa lehibe kokoa aho ary nantsoina handray anjara tamin'ny fifaninanana. Nisy koa ny tsaho. Nifosa ahy ny mpifanila-bodirindrina tamiko, nilaza fa tara loatra aho vao mody ny trano na miala aloha loatra. Nantsoina ho tia tena sy tsy mahalala ny zava-misy aho. Niharatsy kokoa izany rehefa tonga fotoana aho, nilaza ny olona amin'izay azoko aleha sy ny tsy azoko aleha, ny azoko atao sy ny tsy azoko atao.
Srijana SIngh Thakuri miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa nasionaly zokiny. Sary: Nepali Times, nahazoana alàlana.
Notoheriko ny tokony heverina ho fihetsiky ny zazavavy ao amin'ny tanànako: mangina, miondrika, miezaka mba tsy hisy hahita, ary rehefa tonga ny fotoana dia atao amin'ilay azo vadiana.
Tsy niraharaha ireo tsikera aho ary nibanjina ny nofiko. Nanohy ny fianarako aho ary nahazo diplaoma nahazo ny laharana voalohany tao an-dakilasy. Afaka maka vatsim-pianarana aho ary nisoratra anarana tany amin'ny oniversite iray tany Kathmandu. Mbola nanohy nilalao baolin kitra aho ary niseho tamin'ny fifaninanana, nizatra andro aman'alina.
Tsy maningana ny tantarako. Izany no mitranga rehefa omena vahana, hirika sy fitsinjovana ny zazavavy sy ny vehivavy.
Vao feno 20 taona aho, ary tafiditra lisitra sangany farany ho ekipa nasionaly vehivavy mpilalao baolina kitra eto Nepal tamin'ny herinandro lasa teo. Nanasonia fifanarahana aho ary nambara tamin'ny gazety ny anarako. Ankehitriny aho dia mpilalao baolina kitra matihanina misolo tena ny fireneko.
Tsy mbola nahatsapa rehareha aho fa zanakavavin'i Nepal na dia nisy fotoana aza tsy nahatsapako hoe nirehareha ahy ny fireneko.
Tiako ny mitafy ny fanamiana nasionaly mena ary mandeha mankeny an-kianja. Mbola tsapako ihany ny fientanam-po amin'ny fandakana baolina, sy ny baolina tafiditra eny amin'ny vodin'ny harato.
Tiako ny baolina kitra satria nahatonga ahy hahatsapa ho afaka sy mahery ary matanjaka izany. Ny nofinofiko lehibe manaraka dia ny hilalaovan'ny ekipa vehivavy Nepal amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany na ny ho tafiditra amin'ny lalao olaimpika.
Srijana Singh Thakuri tamin'ny 9 septambra tamin'ny dingan'ny ekipam-pireneny tamin'ny lalao nifanandrinana tamin'i Bangladesh tao Kathmandu. Nandresy tamin'ny isa 2-1 i Nepal. Sary: Nepali Times, nahazoana alàlana.
Taorian'ny taona maro, niverina taty aminay i Dada. Te-hilaza aho hoe nanana fifohazana lehibe izy ary nahatsapa ny hadisoany, saingy tsy izay no nitranga. Fa nanandrana zazalahy indray izy, ary nony farany, teraka ny zandriko lahy.
Tiako ny zandriko lahy ary antenaiko fa ho lehibe mijery ahy milalao baolina izy mba hanana fahitana hafa momba ny fahaizan'ny tovovavy.
Nahazo izay notadiaviny hatrizay ny raiko ary nahatanteraka ny nofiko aho. Niantso azy aho tamin'izaho nanao ny ekipa, ary fantatro fa nirehareha ahy izy.
Tsapako koa tato ho ato fa tsy manana zavatra hanaporofoana aminy intsony aho. Ny nofinofiko dia ho an'ny tovovavy hafa toa ahy izay tsy manan-janaka lahy fotsiny ny rain'izy ireo. Ho an'ireo rahavaviko sy ny reniko ny nofinofiko. Fa indrindra indrindra, ho ahy ny nofiko.
Nepal 1 andro izay
Pakistana 7 andro izay